Hargeysa: Maxkamad Xukun Lala Yaabay Ku Ridday 5 Muwaadin | Himilo Media Group
Hargeysa, 6 Maarij, 2019 (Himilo) – Maxkamadda Rafcaanka ee Maroodi-jeex ayaa Shalay shan muwaadin xukuno kala duwan ku xukuntay, ka dib markii lagu eedeeyey inay jareen xadhigga dhulka hoostiisa mara ee shirkadda Internet-ka ee SOMCABLE.
Maxkamadda Rafcaanka Gobolka Maroodi-jeex ayaa midkiiba ku ridday 8 sanno oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $625,000 (Lix boqol iyo shan iyo labaatan kun oo dollar) laba muwaaddin oo la kala yidhaahdo Abwaan Baashe Xasan Maxamed iyo Macallin Cabdiqaaddir Nuur Maxamuud, halka saddex kale oo laba maqan yihiin min lix sanno oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $625,000 oo dollar lagu xukumay.
Saddexda kale ayaa Magacyadoodu kala yihiin Cumar Xuseen Cabdi oo ah nin reer miyi ah oo lgu xukumay 6 sanno iyo lacag dhan $625,000 (Lix boqol iyo shan iyo labaatan kun oo dollar). Waxa kale oo intaas oo kale lagu xukumay laba qof oo maqan oo iyagoo maqan lagu xukumay lix sanno oo xadhig ah iyo ganaax $625,000 (Lix boqol iyo shan iyo labaatan kun oo dollar).
Shantan muwaadin ayaa lagu eedeeyey inay qaarkood dhiirigaliyeen in la jaro ama la gooyo xadhigga Enternetka ee shirkadda SOMCABLE, inay abaabuleen dhallinyaro laga hor keeno xukuumadda, iyo in Abwaanka Baashe uu Madaxweynaha ku dacaayadeeyay “Muuse-Shaanni” oo ah magac dil ah sida xeer ilaalintu ku doodayso.
Xisbiga WADDANI oo ay ka mid ahaayeen Macalin Cabdiqaadir iyo Abwaan Baashe ayaa xukunka ku dhacay Cambaareeyay, waxaanu sheegay in Xukunkaasi la mid yahay kuwii ka soo bixi jiray Maxkamaddii Bedbaadada ee Dawladdii Kacaanka Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre.
Xoghayaha guud ee Xisbiga WADDANI, Khadar Xuseen Cabdi, waxaanu yidhi “Cid garanaysaa ma jirto waxa lagu saleeyay Ganaaxa lacageed ee dhan 625 kun oo dollar, markaa Xukuumaddu way ku waalanaynaa hadday is tidhaahdo Dadka ku Maxkamadee waxa Baraha Bulshada lagu qoro..”